Ahoana ny fametrahana sy fampandehanana Photoshop CC amin'ny Ubuntu | Ubunlog
Ahoana ny fametrahana sy fampandehanana Photoshop CC amin'ny Ubuntu
Photoshop Mbola izy io no mpitarika tsy iadian-kevitra amin'ny programa fanovana sary ankehitriny. Nalefa tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny rafitra fiasa marobe izy io, nefa, na dia androany aza, tsy iray amin'izy ireo ny Linux. Ity dia manana vahaolana mora noho ny fitaovana toy ny PlayOnLinux, izay ahafahantsika mihazakazaka ny programa Windows platform ao anatin'ny tontolo Linux.
Raha toa ka tsy vahaolana mahafa-po anao ny famerenana ny solosainao hanombohana tontolo Windows na hampandeha ilay programa eo ambanin'ny tontolo virtoaly, dia hampianatra anao ity torolàlana ity ny fomba fametrahana sy fampandehanana Photoshop CC amin'ny Ubuntu.
Ny tontolon'ny fotoana anaovana ireto dingana manaraka ireto dia VADIKO, izay tsy tokony hiovaova amin'ny olon-kafa momba ny atiny fa ny endrika sary fotsiny. Inona koa, ny kinovan'ny Photoshop CC izay iasantsika dia ny kinova 32-bit hatramin'ny 2014, satria ilay niseho tamin'ny 2015 dia mbola tsy mifanaraka amin'ny Linux. Koa satria nesorin'i Adobe avy tao amin'ny tranokalany ilay kinova teo aloha, dia tokony hokarohinao io raha tsy manana ny teo aloha hiasa ianao.
1 Mametraka Adobe Photoshop CC
2 Mihazakazaka Photoshop CC
Mametraka Adobe Photoshop CC
Ny dingana voalohany tokony hataontsika dia ny fametrahana ny fitaovana PlayOnLinux. Vitantsika io amin'ny alàlan'ny manager software an'ny rafitray (Ubuntu Software Center) na amin'ny alalanao pejy web izay ilazana ny fizotran'ny fametrahana azy manontolo amin'ny tanana.
Manaraka izany dia hampandeha ny fampiharana PlayOnLinux izahay ary hisafidy ny kinova divay avy amin'ny menio ho an'ny fitaovana izahay. Tsy maintsy misafidy ny kinovan'ny Divay 1.7.41-PhotoshopBrus ary apetaho avy eo.
Raha vantany vao vita ny fizotrany, hiverina eo amin'ny varavarankely PlayOnLinux lehibe izahay ary tsindrio ny bokotra Mametraka> Mametraha programa tsy voatanisa (hita eo amin'ny zoro ankavia).
Avy eo amin'ny efijery manaraka, hataontsika tsindrio ny bokotra Next ary hofidintsika ny safidy Mametraha programa amin'ny kapila virtoaly vaovao.
Ny dingana manaraka dia ny manome anarana ny fampiharana Photoshop CC, izay eto amintsika dia PhotoshopCC.
Avy eo, alao antoka fa mampiasa kinova divay hafa noho ny kinovan'ny rafitra ianao, amboary izany ary apetraho ireo tranomboky ilaina.
Ao amin'ny mpitari-dalana anay hifidy ny kinova divay "1.7.41-PhotoshopBrushes" izahay (Raha tsy hita ao anaty lisitra io dia avereno jerena ireo dingana teo aloha ary apetaho).
Ny varavarankely manaraka dia hamela anao hisafidy ny Fampivoarana 32-bit izay hiasa eo ambanin'ny tontolon'ny Windows. Hamarino tsara safidio ny Windows 7 fa tsy Windows XP, izay ny safidy izay voamarika ho default.
Manaraka izany dia ny dingana sarotra kokoa (raha azo heverina ho toy izany), satria tafiditra ao safidio izay tranomboky tianay hampidirina ho an'ny Photoshop CC hihazakazaka tsara. Hisafidy ireo boaty mifandraika amin'ireto tranomboky manaraka ireto izahay:
Vantany vao vita izany dia tsindrio ny bokotra Next. Avy eo dia tsy maintsy hanao izany isika mankanesa any amin'ny toerana misy ny mpiorina Photoshop CC ary manomboka fanatanterahana azy.
Mihazakazaka Photoshop CC
Vantany vao vita ny fametrahana Photoshop CC, raha tsy izany dia miroso isika soraty ny dika mitovy amin'ilay programa handefa kinova fitsapana mandritra ny 30 andro izahay. Amin'ity tranga ity dia ilaina izany andao hotsoahina ny tambajotran'ny solosaina hanohy. Tsindrio eo Hiditra Mpikambana ary hiandry ny rafitra hamerina hafatra diso isika, amin'izay fotoana izay dia hanohy hanery izahay Misoratra anarana aorian'izay.
Ny mpampiasa sasany dia hahatsikaritra fa ny bara fametrahana dia alohan'ny hahatongavany amin'ny faran'ny azy, fa a hafatra diso. Tsy tokony hanahy momba an'io toe-javatra io ianao satria ny programa dia mitohy mihodina hatrany aoriana. Noho izany, mijanòna minitra vitsy kokoa ny fizotrany ary kitiho ny bokotra Manaraka.
Farany, azonao atao ny manome rohy ao amin'ny PlayOnLinux for Photoshop CC izay hamorona kisary eo amin'ny biraonao.
Fanamarihana farany avy amin'ny mpanoratra, raha misy fitaovana toa ny utility hanafoanana tsy mety aminao marina, mankanesa any amin'ny Pandinin-tsoratra> Performance ary esory ny safidy "Ampiasao ny mpikirakira sary".
loharanom-baovao: Ny kanto ahombiazana amin'ny fahombiazana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Ahoana ny fametrahana sy fampandehanana Photoshop CC amin'ny Ubuntu
Abyssal Illustra Edits dia hoy izy:
Taona vitsivitsy lasa izay dia sosotra aho nanandrana nametraka ny suite Adobe tao amin'ny Ubuntu, noho izany dia noterena hampiasa ny Gimp, Scribus ... sy ireo fandaharana mitovy amin'izany aho izao, izao dia tsy hiverina amin'ny Adobe intsony.
Valiny tamin'i Abisal Ilustra Edita
Diego Martinez Diaz dia hoy izy:
Valiny tamin'i Diego Martinez Diaz
Louis Allamilla dia hoy izy:
Tsy mahalala na inona na inona ianao Diego Martinez Diaz ... Photoshop na ho faty aho
Valiny tamin'i Luis Allamilla
adobe air dia tsy mifanaraka amin'ny linux intsony, manana fahazoan-dàlana adobe voaloa aho fa rehefa manandrana misintona photoshop aho dia milaza amiko fa "tsy mahafeno ny fepetra farafahakeliny ny rafitra"
Mampalahelo tokoa fa isaky ny manahirana antsika kokoa ny fidirana amin'ireo programa ireo eto
Manana safidy toa an'i Gimp na Krita ary safidy hafa tsy misy farany… maninona no mianjera amin'ny tambajotran'ny adobe sy ny fanamavoana azy ireo, ampindramin'ny microsoft, amin'ireo mpampiasa Gnu / Linux? Niasa tamina matihanina aho hatramin'ny taona 90 tamin'ny olan'ny famolavolana audiovisual sy sary ary efa niasa nandritra ny taona maro tamin'ny fitaovana adobe aho, anio dia saika ny zavatra rehetra ataoko ao amin'ny gnu / linux, izay ahitan'i Blender tsara kokoa noho ny amin'ny windows, izay na i Maya aza dia milamina kokoa haingana, na dia tsy maimaim-poana aza ity, izay ahafahako miasa tanteraka miaraka amin'i Gimp, Krita ary ny safidy hafa hafa toa ny natron sy kdenlive ... izay mamonjy ahy isan-taona amin'ny fahazoan-dàlana manome ahy hanavao ny masiniko. Fankasitrahana mandrakariva ny loharanom-baovao izay nisy nandritra ny taona vitsivitsy nanaovako fanomezana mba hampirisihana ny fampandrosoana, tsy te-hahita ny logo an'ny adobe akory aho, mahatonga ahy ho maloiloy ... ary ny fanomezam-boninahitra an'i Microsoft, izay fantatray dia iray amin'ireo tompon-trosa lehibe indrindra ao Apple, maharikoriko ... manadala azy ireo.
Juan Carlos Herrera Blandón dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao noho io antony manosika io, ny marina mampahatezitra ahy mahita fa ireo orinasa lehibe toa an'i Microsoft dia manararaotra ny fahefana hanao izay tiany amin'ny olona, ​​izany no ianarako mampiasa Linux OS amin'ity tranga ity Manjaro sy Ubuntu, repository roa samy hafa saingy ho hitako izay tiako kokoa. fiarahabana
Valiny tamin'i Juan Carlos Herrera Blandon
Peruse, safidy tsara hamakiana tantara an-tsary amin'ny Kubuntu
Galago Pro, alternativa Ubuntu amin'ny Macbook?